Nekurangarira kuti kuvakwa
Food uye zvinwiwa
Arts uye Entertainment
News uye Society
Sports uye Fitness
Kuti tiite anobudirira utariri kukura kambani unofanira kuziva chaizvoizvo chii sei zvikuru uye chinofanira kuitwa, zvakadini ndiyo kweShanduro yokuvakira, uye zvichingodaro. Panguva iyoyo yokuti Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri kushandisa zvinhu, basa, mari vanofanira kuyera, kuongorora, chinyorwa uye kudzora zvose chokwadi, kuitika zvoupfumi basa. ruzivo urwu zvizere uye zvakanaka, achidzivirira kuvakwa.
The Mishumo zvinogona kuonekwa zvose zvebhizimisi kwema kubva quantitative uye Qualitative divi. Nekurangarira rokuvaka anosarudza kwete chete chitsama kwenhumbi anobudiswa kana akuitira. Mashoko anoratidza uye mari ndakawana, mari, kuparadzirwa mari nezvimwe variables.
Maererano nemitemo zvemitemo, nekurangarira kuti kuvakwa chinhu akarayira chivako pamusoro kunyoresa, muunganidzwa, collation kuti mashoko panyaya mari. Mashoko anoratidza pfuma chinzvimbo, kambani kuzvipira uye mirayiridzo achishandisa imwe vhidhiyo, chinoenderera, chichiitwa kukarukureta hupfumi nehunhu kushanda.
Nekurangarira pakuvaka kunosanganisira paumbwe rakavimbika (kwakakwana uye unhu), uyewo nenguva mashoko kunozivisa zvoupfumi uye mari mabasa eungano. Mashoko aya anokosha, uye zvinoshandiswa mukugadzirwa management vashandi, ari kururamiswa, uyewo mune sarudzo.
Zvinofanira kucherechedzwa kuti pakuvaka chizvidavirire ine maitiro ayo. Izvi zvinhu kusiyanisa kubva dzimwe mhando zvoupfumi (mutero, nhamba, operative) nhau. Saka, mabasa kuti anoita rokuzvidavirira rokuvaka vari parinoperera kutsanangurwa imwe sangano. Achinyora zvachose zvinoratidza zvose yezvokutengeserana pezvakaitwa kuti kuitika mune boka, mumwe rakanyorwawo chokwadi yakatarwa chikuru gwaro kana muchina rutsigiro ane pamutemo hwaro. Accounting anosiyana chamazuva panguva kwema kuitika zvavakanga vachida kuita. All mabhizimisi pezvakaitwa, munataisireva kana pfuma akaratidza hwemari zviratidzi nokupfupikisa chaiwo tsika. All kuti chokwadi tiri pasina, uye saka hapana congruence Kufungisisa mabasa. Uyezve, nekurangarira kuti kambani yokuvaka iine chaiyo nzira pachake date kugadzira. Nzira idzi hadzingoshandi dzimwe mhando kukarukureta kana kashoma kushandiswa.
Saka, nzira rokuzvidavirira unokubvumira kusika zviratidzo, maererano iyo tinogona vafunga pamusoro kukura yesangano, guru, munataisireva uye avo marongerwo. The vakawana date inokosha nokuda Implementation kuti kufungidzira uye kuronga.
Maererano zvokudya mumutemo ano, chizvidavirire zvinofanira kuitwa pamusoro mabhizimisi zvose izvo zvine pamutemo.
Sezvo nyika tsika zvinoratidza, mashoko anogona kuchinja chimiro, kugutsikana, zvichienderana nokuchinja mune zvemagariro, zvematongerwo enyika, zvoupfumi, ruzhinji zvekutepfenyura. Panguva mashoko munyika dzakasiyana vane nyika maitiro avo, vakanga yakaumbwa pamusoro emakore akawanda.
Nhasi, zvinotevera zvinokosha chizvidavirire mabasa nokuda kambani yokuvaka:
1. Órgãos mashoko akavimbika pamusoro kambani.
2. Ichapa anodiwa Data zvemukati uye kwokunze zvemari mashoko vanoshandisa kuongorora uchiwirirana yokupira dzemunharaunda ose ehurumende.
3. Prevention of Migumisiro yakaipa ezvoupfumi basa, uyewo kuti vawane dzakawanda zvokushandisa kuitira mari kutsiga kambani.
Zano zvemari zviri zvebhizimisi
The chizvidavirire Misimboti kuti zvemari nhau uye gadziriro yayo
Payroll Vashandi: Payment muenzaniso kuchikoro uye panguva mumaindasitiri zvebhizimisi
75 zvibodzwa - "misha ne shareholders". Account chizvidavirire
Pfungwa yokuti "zvinyorwa woshanda"
Pbu23 / 2011 - IFRS (ias) 7. Real swatanudza zvavo chizvidavirire mitemo.
Kudyara apuro miti - rinoda kushanda basa kuti zvinoda kugadziriswa uye kushingaira
How kusimbisa zvipikiri dzako
Kana uine ndichinzwa zino, zvokuita? Zvinokonzera uye Kurapwa
Country Vatican: Where zviri?
Beckham kugadzirwa musoro: How kushandura manyorero nomutambi nezera
Sei cook noodles
Kuzvimba periosteum: mhando uye unhu
Luis Figo: nhabvu Biography
How uye chii kupfeka ane chaiwo dare shangu?
Zvikasabudiswa papurazi Greengage: rondedzero kirasi chaiyo kumhara uye kuenda
Chii Zoologie? Kuti inoongorora sayenzi zvemhuka?
Adenomyosis dumbu 1 dhigirii
Copyright © 2018 sn.birmiss.com. Theme powered by WordPress.